Plastic Dro၊ Linear စကေး၊ စက်စက်၊ စက်စက် - BiGa
Dongguan City Biga Grating Machinery Co. , Ltd. ကို ၁၉၉၆ ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးကျွန်ုပ်တို့ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေသည်။ ယခုအခါအဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းနယ်ပယ်မှာ linear အတိုင်းအတာ၏သုတေသနနှင့်ထုတ်လုပ်မှု၊ သံလိုက်စကေးဒီဂျစ်တယ်ဖတ်ရန်စနစ်၊ မျက်နှာပြင်ကြိတ်စက်၊ လမ်းမျက်နှာပြင်ကြိတ်စက်၊ EDM အပေါက်တူးစက်၊ EDM ဝါယာကြိုးဖြတ်တောက်ခြင်းစက်၊ ပုံရိပ်တိုင်းတာခြင်း၊ ၀ င်ရိုး ၃ ခု / ၀ င်ရိုးစက်စက်၊ လေဆာဖြတ်စက်၊ ထွင်းသောစက်နှင့် EDM စက်။ ရောင်းချမှုနှင့်စပ်လျဉ်း။ အွန်လိုင်းအထောက်အပံ့၊ ဗီဒီယိုနည်းပညာပံ့ပိုးမှု၊ အပိုပစ္စည်းများ၊ ကွင်းဆင်းတပ်ဆင်ခြင်း၊ အသုံးပြုသူမတော်လျော်သောလည်ပတ်မှုကြောင့်ပျက်စီးခြင်းသို့ ဦး တည်သောပြန်လည်ပြုပြင်ထားသောဆက်စပ်ပစ္စည်းများသည် ၀ ယ်သူ၏ဈေးနှုန်းဖြင့်သာကျသင့်သည်။
Bica သည်အမြဲတမ်းသင့်အားသင်လိုအပ်ချက်များနှင့်အမျိုးမျိုးသောပုံစံမျိုးစုံဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောပစ္စည်းများနှင့်အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်စေနိုင်သောအဓိကအားဖြင့်ပုံသွင်းခြင်း၊ ဟာ့ဒ်ဝဲပြုပြင်ခြင်း၊ သတ္တုထုတ်လုပ်ခြင်းသို့မဟုတ်ပလပ်စတစ်ထုတ်ကုန်များတွင်များစွာသောစက်ပစ္စည်းများဖြင့်ပေးသည်။
ကျွန်ုပ်တို့နှင့်တိုင်ပင်ပါ။ ၀ န်ဆောင်မှုပေးသည်။ ၁။ သင်၏ထုတ်လုပ်မှုအတွက်အကောင်းဆုံးအဖြေ။ 2. အစိတ်အပိုင်းများ, ရေးဆွဲဖြည့်ဆည်းမရနိုင်ပါ။
နှစ်ပေါင်း ၂၀ ကုန်ထုတ်လုပ်မှုအတွေ့အကြုံ
Hot Sale BiGa ZNC 450 အရည်အသွေးမြင့်ထိုင်ဝမ် CTEK control Die Sinking Machine / Die Sinker အီလက်ထရောနစ်ဆေးထုတ်စက် EDM
PCA250- တိကျစွာ - မျက်နှာပြင် - ကြိတ် - စက်
အထွေထွေ Functions မက်ထရစ် / lmperial ကူးပြောင်းခြင်း။ သုည Reset ။ စင်တာရှာဖွေခြင်းကိုအထောက်အကူပြုရန်ကြိုတင်သတ်မှတ်ထားသောအရွယ်အစား ၁-၂ အဝေးသင် Mode ။ အမှတ်ရစရာရာထူးပြန်သတိရပါ။ Absolute နှင့် Incremental Coordinate display mode ။ စက်မှုသုည & Workpiece သုည။ Shrink Function: ချုံ့ခြင်းသို့မဟုတ်ပုံသွင်းခြင်းကျုံ့ခြင်းအတွက်လျော်ကြေးပေးရန် Shrinkage allowance ကိုသတ်မှတ်နိုင်သည်။ Pitch Circle Diameter (PCD) Function: အပေါက်တစ်ခုစီအတွက် X နှင့် Y ကိုသြဒီနိတ်များကို console မှထုတ်ပေးလိမ့်မည်။ ဂဏန်းတွက်စက် Functions သင်္ချာ Functions များ - ပေါင်းထည့်ခြင်း၊ နုတ်ခြင်း၊
ထည်: ABS ပိုလီမာထည်သေတ္တာသွန်းသောလူမီနီယံတုံ့ပြန်မှုမြန်နှုန်း: 60 မိနစ်။ (198.6feetmin) အတိုင်းအတာ: TOP20 များအတွက် 265 * 182″ 48mm; 290 BC 190″ 105mm BC20 အတွက်အလေးချိန်: BC20 အတွက် TOP20,2.85KG အတွက် 1.1KG အတွက်အရေအတွက်အမှား: + -1count Connection အမျိုးအစား:9pin D-type Encoder ထည့်သွင်းမှု: 5v TTL 90 quadrature phase ခြားနားချက် Keypad type: PCB mounting ထိတွေ့နိုင်သော switch သည် ပါဝါအရင်းအမြစ်: AC 110-220V, 50-60 Hz ပါဝါ: Universal power supply အပူ: လည်ပတ်မှု0~ 40 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်, Display: 8- ဂဏန်း gree ...
ထည်: ပလတ်စတစ်ထည်တုံ့ပြန်မှုမြန်နှုန်း: 60 မိနစ်။ (198.6feetmin) အရွယ်အစား: TOP5 အလေးချိန်အတွက် 265 * 182″ 48mm: TOP20 Quantizing error အတွက် + -1count Connection အမျိုးအစား:9pin D-type Encoder ထည့်သွင်းမှု: 5v TTL 90 quadrature phase ခြားနားချက် Keypad type: PCB တပ်ဆင်ထားသောထိတွေ့နိုင်သော switch ပါဝါအရင်းအမြစ်: AC 110-220V, 50-60 Hz ပါဝါ: Universal power supply အပူချိန်: လည်ပတ်0~ 40 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်, Display: ရှစ်ဂဏန်းအစိမ်းရောင်အရောင် LED display ကိုအထွေထွေ Functions မက်ထရစ် / lmperial ကူးပြောင်းခြင်း။ သုည Reset ။ ကြိုတင်သတ်မှတ်ထားသည် ...
ထည်: သတ္တုထည် casing တုံ့ပြန်မှုမြန်နှုန်း: 60mmin ။ (198.6feetmin) ။ အရွယ်အစား: BC2 အလေးချိန် 290″ 190″ 105mm: BC20 အတွက် TOP20,2.85KG အတွက် 1.1KG ။ အမှားအရေအတွက်: + -1count ။ Connection အမျိုးအစား:9pin D-type ။ ကုဒ်သွင်း input ကို: 5v TTL 90 quadrature အဆင့်ခြားနားချက်။ Keypad အမျိုးအစား: PCB mountable ထိတွေ့နိုင်သော switch နှင့်အတူအမြှေးပါး။ ပါဝါရင်းမြစ်: AC 110-220V, 50-60 Hz ။ ပါဝါ - Universal power supply ။ အပူချိန်: လည်ပတ်မှု ၀၀ မှ ၄၀ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အထိပြသခြင်း။ ၈ - ဂဏန်းအစိမ်းရောင်ရှိသော LED display ။ မက်ထရစ် / lmperial ၏အထွေထွေ Functions များ ...
ထည်: ABS ပိုလီမာထည်သေတ္တာသွန်းသောလူမီနီယံတုံ့ပြန်မှုမြန်နှုန်း: 60 မိနစ်။ (198.6feetmin) အတိုင်းအတာ: TOP20 များအတွက် 265 * 182″ 48mm; 290 BC 190″ 105mm BC20 အတွက်အလေးချိန်: BC20 အတွက် TOP20,2.85KG အတွက် 1.1KG အတွက်အရေအတွက်အမှား: + -1count Connection အမျိုးအစား:9pin D-type Encoder ထည့်သွင်းမှု: 5v TTL 90 quadrature phase ခြားနားချက် Keypad type: PCB mounting ထိတွေ့နိုင်သော switch သည် ပါဝါအရင်းအမြစ်: AC 110-220V, 50-60 Hz ပါဝါ: Universal power supply အပူ: လည်ပတ်မှု0~ 40 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်, Display: 8- ဂဏန်းအစိမ်းရောင်က ...
အမည် ending ကွေးစက်လမ်းညွှန်စကေးဂျာမန်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်： REICHEN မော်ဒယ်： GOS-27-5 ခရီးသွား： ၂၇၀ မီလီမီတာကွေးစက်လမ်းညွှန်စကေးအချက်ပြဇယား - မော်ဒယ်လ်ကုဒ်ပလပ်နံပါတ် ၁234567 899 D Thread color အဝါရောင်အစိမ်းရောင်အပြာရောင်အနက်ရောင် / အနက်ရောင်အနီရောင် / အနက်ရောင်အဖြူရောင်အနီရောင်အချက်ပြ ZBA 0V / Z / B / A 5V တပ်ဆင်မှုအရွယ်အစား -
ASD8 BiGa အမြင့်ပေ ...
Linear Scale ထူးခြားချက်များ Linear Scale သည်ကျွန်ုပ်တို့၏တန်ပြန်နှင့်တွဲဖက်အသုံးပြုသောအခါ manual machine များသို့မဟုတ် linear ရွေ့လျားမှုရှိသည့်အခြားပစ္စည်းကိရိယာများအတွက်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ ဥပမာဖြတ်စက်များ။ တနည်းအားဖြင့်စကေး output ကို CNC သို့မဟုတ် PLC ယူနစ်များမှတဆင့်စက်ကိရိယာများသို့မဟုတ်အလားတူပစ္စည်းကိရိယာများကိုအလိုအလျောက်နေရာချခြင်းအတွက်အသုံးပြုနိုင်သည်။ တိုင်းတာမှုသို့မဟုတ်မြင့်မားသောတိကျမှန်ကန်မှုကိုစစ်ဆေးခြင်းနှင့်တိုင်းတာခြင်းအတွက်အသုံးပြုသောအခြားတိုင်းတာခြင်းပစ္စည်းကိရိယာများကိုညှိနှိုင်းရန်ချိန်ခွင်များကိုလည်းတပ်ဆင်နိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အဖော် ...
ASD5 စီးရီး BIGA ဖန်ခွက် Grating စကေး linear စကေးဒါဟာ Grating စကေးဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန် Linear scale Grating Scale သည်ကြိတ်စက်၊ ကြိတ်စက်၊ ဖောက်သည်များ၏လိုအပ်ချက်အရကုမ္ပဏီအနေဖြင့်အခြားစက်ပစ္စည်းများနှင့်အထူးစက်ကိရိယာများနှင့်အတူအထူးအမျိုးအစားများနှင့်သတ်မှတ်ချက်များကိုဆန်ခါခြင်းကဲ့သို့သောထုတ်ကုန်များကိုထုတ်လုပ်နိုင်သည်။ ဆန်ခါအရွယ်အစားအသေးစိတ်ဖော်ပြချက် - ၁၊ ဘားအံ ၀၀ - ၀.၂၂ မီလီမီတာ (၅၀ လိုင်းအားလုံးအတွက် / မီလီမီတာ)၊ ၀.၀၄ မီလီမီတာ (၂၅ လိုင်းတွဲ / မီလီမီတာ) ၂, ဆုံးဖြတ်ချက် ...
ASD4 စီးရီး BIGA ဖန် ...
ဤသည် Grating စကေးဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန် Linear scale Grating Scale သည်ကြိတ်စက်၊ ကြိတ်စက်၊ ဖောက်သည်များ၏လိုအပ်ချက်အရကုမ္ပဏီအနေဖြင့်အခြားစက်ပစ္စည်းများနှင့်အထူးစက်ကိရိယာများနှင့်အတူအထူးအမျိုးအစားများနှင့်သတ်မှတ်ချက်များကိုဆန်ခါခြင်းကဲ့သို့သောထုတ်ကုန်များကိုထုတ်လုပ်နိုင်သည်။ ဆန်ခါအရွယ်အစားအသေးစိတ်ဖော်ပြချက် - ၁၊ ဘားအစေး - ၀.၀၂ မီလီမီတာ (၅၀ လိုင်းအားလုံးအတွက် / မီလီမီတာ)၊ ၀.၀၄ မီလီမီတာ (၂၅ လိုင်းတွဲ / မီလီမီတာ) ၂, ပြတ်သားမှု - 0.0005mm, 0.001mm, 0.005mm, 0.01mm 3, တိကျမှု ...
EA-CNC-Standard အလိုအလျောက် ...
Model A300CNC A400CNC A500CNC တိုင်းတာနိုင်သောအကွာအဝေး (mm) 300 * 200 * 180 400 * 300 * 180 500 * 400 * 180 စက်အရွယ်အစား (mm) 1450 * 1050 * 1650 1600 * 1200 * 1650 1800 * 1400 * 1650 အလေးချိန် (ကီလိုဂရမ်) 450 500 650 Max.load (kg) 20 25 25 X-Yaxis ၏တိကျမှု3+ L / 200um Z ဝင်ရိုး၏တိကျမှု5+ L / 200pm XYZ resolution 1.0.0pm ထပ်ခါတလဲလဲ (mm) 0.003 Linear encoder ဖန် linear linear စကေးရွေ့လျားနှုန်း (mm / s) XY： 400 Z： 100 ကင်မရာအမျိုးအစား SBK-HC 5361/2 လက်မ 700 လိုင်းစက်ရုံအရောင်ကင်မရာ Liner လမ်းညွှန်ထိုင် ၀ မ်“ Hi win” P ...
EW အလျားလိုက်လက်စွဲ ...
Model W200 W300 တိုင်းတာနိုင်သောအကွာအဝေး (mm) 200 * 100 * 200 300 * 200 * 200 စက်အရွယ်အစား (mm) 950 * 845 * 1285 1050 * 845 * 1285 အလေးချိန် (ကီလိုဂရမ်) 150 190 Max.load (kg) 20 20 တိကျမှန်ကန်မှုရှိသော XY ဝင်ရိုး3+ L / 200 卩မီတာ Z ဝင်ရိုး၏တိကျမှု5+ L / 200 卩မီတာ XYZ resolution 1 .Opm (option 0.5.5, 0.1 um စကေး) Repeatability (mm) 0.003 Linear encoder ဖန်မှန် linear စကေးကင်မရာအမျိုးအစား SBK-HC536 1 / ၃ လက်မ ၆ လိုင်းစက်မှုဇုန်အရောင်ကင်မရာ Liner လမ်းညွှန် Z ၀ င်ရိုး - ထိုင်ဝမ် HIWIN” P တန်းလိုင်း ...
E-AC-CNC- စီးပွားရေးအချက်အချာကျ ...
Model AC300CNC AC400CNC AC500CNC တိုင်းတာနိုင်သောအကွာအဝေး (mm) 300 * 200 * 180 400 * 300 * 180 500 * 400 * 180 စက်အရွယ်အစား (mm) 850 * 130 * 1550 1000 * 1400 * 1550 1200 * 1500 * 1550 Weiqht (kq) 260 350 450 Max.load (ကီလိုဂရမ်) 20 25 25 XY ဝင်ရိုး၏တိကျမှု3+ L / 150pm Z ဝင်ရိုး၏တိကျမှု5+ L / 100pm XYZ resolution 1.0.0 pm ထပ်တလဲလဲ (mm) 0.005 Linear encoder ဖန် linear linear စကေးရွေ့လျားမြန်နှုန်း (mm / s) XY : 200 Z: 100 ကင်မရာအမျိုးအစား SBK-HC536 ၁.၂ လက်မ ၇၀၀ လိုင်းစက်မှုရောင်စုံကင်မရာ Liner guide ...
Standard ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ: Magnetic Chuck 1 pcs Gri ...
Precision CNC မျက်နှာပြင်ကြိတ်စက် 450CNCS ဖွဲ့စည်းခြင်း
Standard ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ: Magnetic Chuck 1 pcs Grin ...
PCD100250 / PCD100300 တိကျသောမျက်နှာပြင်ကြိတ်ခွဲခြင်း ...
parameter စားပွဲတင် parameter သည်ယူနစ် PCD -...
PCLD120300NC / PCLD150300NC Beam-type တစ်ခုတည်းခေါင်းတစ်ခု ...
parameter စားပွဲတင် parameter သည်ယူနစ်ကို PC L ကို ...
parameter စားပွဲတင် parameter သည်ယူနစ် 8020 ...
VMC စီးရီး CNC စက်ကြိတ်စက်သုံးခက်လမ်းကြောင်း
ထိုင်ဝမ်အရည်အသွေးတရုတ်စျေးနှုန်း MV855 စက်စင်တာ
ထုတ်လုပ်မှုအရွယ်အစားမော်ဒယ်ယူနစ် MV 855 ...
ဟိုက်ဒရောလစ်ညှပ်စက်၏နည်းပညာဆိုင်ရာ parameter သည် ...
အဓိကအင်္ဂါရပ်•ဂဟေဆော်ခြင်းဘောင်လုံး၊ အပူချိန် ...
ဟိုက်ဒရောလစ်စာနယ်ဇင်းဘရိတ်၏နည်းပညာဆိုင်ရာ parameter သည် ...
အလယ်အလတ်မြန်နှုန်း EDM ဝါယာကြိုးဖြတ်တောက်စက်
Model W200 W300 တိုင်းတာနိုင်သောအကွာအဝေး (mm)2...
EA-CNC-Standard အလိုအလျောက်ပုံရိပ်တိုင်းတာခြင်း ...
မော်ဒယ် A300CNC A400CNC A500CNC တိုင်းတာခြင်း ...
စဉ်ဆက်မပြတ် CNC နည်းပညာတိုးတက်မှုနှင့်အတူ, တရုတ် CNC စက်ယန္တရားစက်မှုလုပ်ငန်းတဖြည်းဖြည်းအသွင်ပြောင်းသို့ပြောင်းလဲခဲ့သည်
စျေးကွက်ဝယ်လိုအားများပြားလာခြင်းနှင့် CNC နည်းပညာအားစဉ်ဆက်မပြတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာခြင်းတို့ကြောင့်တရုတ် CNC စက်ယန္တရားစက်ရုံသည်အရေးကြီးသောပြောင်းလဲမှု - ဆန်းသစ်သောအတွေးအခေါ်များ၊ ရောင်းလိုအားနှင့် ၀ ယ်လိုအားဈေးကွက်တွင်ပြောင်းလဲမှုများ၊ ကုန်ပစ္စည်းအဆင့်မြှင့်တင်မှုမြန်နှုန်းနှင့်အခြားရှုထောင့်များသို့တဖြည်းဖြည်းဝင်ရောက်လာသည်။ ။
Edm ကိုအဓိကအားဖြင့်မှိုများနှင့်အပေါက်များနှင့်ရှုပ်ထွေးသောပုံသဏ္withာန်များဖြင့်အစိတ်အပိုင်းများကိုစက်ကိရိယာများအတွက်အသုံးပြုသည်။ အမျိုးမျိုးသောလျှပ်ကူးပစ္စည်း (ဥပမာသတ္တုစပ်နှင့်မာကြောသောသံမဏိ) ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ နက်ရှိုင်း။ ကောင်းမွန်သောအပေါက်များ၊ အထူးပုံစံတွင်းများ၊ နက်ရှိုင်းသော groove များ၊ စက်အား ...
Gantry အမျိုးအစားမျက်နှာပြင်ကြိတ်စက်, Gantry လူပျိုမျက်နှာပြင်ကြိတ်စက်, Gantry မျက်နှာပြင်ကြိတ်စက်, Gantry Single-End မျက်နှာပြင်ကြိတ်စက်, Gantry နှစ်ထပ်ခေါင်းမျက်နှာပြင်ကြိတ်စက်, Gantry နှစ်ဖက်မျက်နှာပြင်ကြိတ်စက်,